नेपालको शासकीय चरित्र श्रीलंका जस्तो छ, अर्थतन्त्र होइन : डा वाग्ले
काठमाडौं । अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक ऋण तथा शोधनान्तर स्थिति नभई शासकीय चरित्र भने श्रीलंकाको जस्तै रहेको बताएका छन् ।अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति भने फरक फरक रहेको उनले उल्लेख गरे । डा. वाग्लेले अघिल्लो साता श्रीलंकाको संसदमा त्यहाँका अर्थतन्त्र उकास्ने उपायबारे विशेष छलफलमा भाग लिएका थिए ।
बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. वाग्लले नेपाल र श्रीलंकाबीचमा केही समानता रहेको र त्यो शासकीय स्वरुपसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताए ।
शासकहरुले हचुवाको भरमा लिने नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने भन्दै श्रीलंकाले त्यस्तै गरेका कारण सो मुलुक टाट पल्टेको उनले बताए । यसमा करमा दरहरुमा बीना अध्ययन चलाउनेदेखि लोकप्रिय हुन लिएका कतिपय नीतिले भूमिका खेलेको बताए ।